दशैं चलिरहेकै बेला रवि लामिछानेसँग भड्किए भाइरल मन्त्री प्रेम आले, ‘ग्यालेक्सी फोर के’ नै धरापमा पर्नेगरी एक्सनमा ! – GALAXY
दशैं चलिरहेकै बेला रवि लामिछानेसँग भड्किए भाइरल मन्त्री प्रेम आले, ‘ग्यालेक्सी फोर के’ नै धरापमा पर्नेगरी एक्सनमा !
लामिछानेले आलेहरुलाई मन्त्री बनाउँनु पर्ने कुनै कारण नभएको भन्दै उनले विदेशमा भएको भए उनीहरु सरकारमा होइन सर्कसमा हुने थिए भनेका छन् । आफ्नो कार्यक्रम सिधा कुरा मार्फत आक्रामक प्रस्तुति दिएका लामिछानले अघिल्लो पटक ओली सरकारमा समेत मन्त्री भएका प्रेम आलेको भाइरल भाषणको क्लिप नै बजाएका थिए । सात नम्बर गियरमा सरकार अघि बढछ भन्ने आलेको भाषण बजाउँदै लामिछानेले भन्नुुसम्म भनेका थिए ।